Chukwu gozie Federal Republic of Nigeria: Okwu Onye isi ala na COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Chukwu gozie Federal Republic of Nigeria: Okwu Onye isi ala na COVID-19
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Na Nigeria, Onye isi ala BU Muhammadu Buhari gwara ndị Naijiria taa banyere ọnọdụ mgbochi iji lụso ọrịa ọgbụgba COVID-19 ọgụ. Nke ya Onye Isi Staff nwụrụ na Coronavirus.
Okwu ya (transcript)
1. Fellowmụnna Nigeria
2. M ga-ebido site n'ịja unu niile maka nnabata na ịhụ mba n'anya nke unu gosipụtara n'ọgụ anyị na-alụkọ iji lụso nnukwu nsogbu ịma aka nke ọgbọ anyị ọgụ.
3. Site na ụnyaahụ, 26th Eprel 2020, ihe nde mmadụ atọ akwadoro nke COVID iri na itoolu ka edekọtara n'ụwa niile na ihe dịka narị puku iteghete. O di nwute na ihe dika puku mmadu abuo nwuru anwu dika oria ojoo a.
4. Usoro ahụike na akụnụba nke ọtụtụ mba na-aga n'ihu na ọgụ n'ihi ọrịa coronavirus.
5. Naịjirịa na-aga n’ihu na-akwado ma na-emegharị ihe maka ụwa ọhụrụ ndị a kwa ụbọchị. N'uhuruchi a, m ga-eweta ihe ndị dị ka ha ma kọwaa atụmatụ anyị maka ọnwa na-abịanụ maara nke ọma na ụfọdụ isi mgbanwe na echiche nwere ike gbanwee ụbọchị ma ọ bụ izu na-abịa.
6. Kpọmkwem izu abụọ gara aga, e nwere narị atọ na iri abụọ na atọ ekwenyela ikpe na steeti 20 na Federal Capital Territory.
7. Ruo ụtụtụ taa, Naịjirịa edepụtaala otu puku na narị abụọ na iri asaa na atọ n'okirikiri obodo 32 na FCT. N’ụzọ dị mwute, ikpe ndị a gụnyere ọnwụ ọnwụ 40.
8. Agam eji ohere a gosi ezi nkasi obi diri ezinulo ndi Naijiria nile ndi nwuru anwu site na COVID oria iri na iteghete. Nke a bụ mfu mkpokọta anyị na anyị na-eso uju.
9. modelsdị nke mbụ buru amụma na Naịjirịa ga-edekọ ihe ruru puku mmadụ abụọ egosipụtara na ọnwa mbụ mgbe edechara akwụkwọ ahụ.
10. Nke a pụtara na agbanyeghị mmụba siri ike n'ọnụọgụgụ nke ọnụọgụ edepụtara n'ime izu abụọ gara aga, usoro ndị anyị tinyegogo ugbu a amịpụtala ezigbo ihe megide amụma ahụ.
11. Ọnụọgụ nke ikpe e si mba ọzọ webata agbadatala naanị 19% nke ikpe ọhụụ, na-egosi na mmechi ókèala anyị rụpụtara ezigbo ihe. . Ndị a bụkarịrị ndị Nigeria ibe anyị na-alọghachite oke ala anyị. Anyị ga-aga n'ihu ịmanye usoro iwu mbata oke ala dịka akụkụ nke atụmatụ njide.
12. Taa, thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ Maka Ọrịa na Nigeria (NCDC) kwadoro ụlọ nyocha 15 na mba ahụ dum na ngụkọta ike iji mee nyocha 2,500 kwa ụbọchị na mba ahụ.
13. Dabere na nzaghachi gị, Lagos Gọọmentị Steeti, na FCT site na nkwado site na NCDC eguzobela ọtụtụ ebe nchịkọta ihe nlele na Lagos na FCT. Ha na-enyocha usoro nyocha ụlọ nyocha ha iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke ule ha ga-abawanye gụnyere nnabata nzere nke ụlọ ọrụ nyocha ndị ahọpụtara nke na-ezute nzere ntozu.
14. Ọtụtụ ọhụrụ n'ụzọ zuru ezu onwem ọgwụgwọ na iche iche a rụọ ọrụ gafee mba si otú amụba bed ike na ihe dị ka puku atọ. N'oge a, m ga-aja ndị Gọvanọ Steeti mma maka ibido Centlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mberede Mberede nke Ọchịchị, nguzobe nke usoro ọgwụgwọ ọhụrụ, na nnyefe nke usoro nkwukọrịta ihe egwu dị egwu.
15. Azụwo ihe karịrị puku ndị ọrụ ahụike iri. Maka nchedo ha, ekesaala ndị ọzọ ihe nchebe onwe ha na steeti niile. Ọ bụ ezie na anyị enwetawo nsogbu ịma aka, anyị na-adịgide adịgide iji guzobe usoro ntinye siri ike iji hụ na ndị ọkachamara a nwere ike ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu ma bụrụ ndị a kwadebere nke ọma.
16. N’ikwekọ na nkwa gọọmentị anyị mere iji melite ọdịmma nke ndị ọrụ ahụike, anyị ebinyela aka n’akwụkwọ nkwekọrịta maka inye ndị ọrụ ihe ọghọm na ihe enyemaka ndị ọzọ na ndị ọrụ ngalaba ngalaba ahụike dị mkpa. Anyị enwetakwala mkpuchi mkpuchi maka ndị ọrụ ahụike puku ise n'ihu. N'oge a, m ga-aja ndị ọrụ mkpuchi mma maka nkwado ha iji mezuo nke a n'ime obere oge.
17. Naịjirịa gara n’ihu na-anata nkwado site n’aka mba ụwa, ụlọ ọrụ dị iche iche, ndị ọrụ onwe ha, na ndị mmadụ na-anụ ọkụ n’obi. Nkwado a emeela ka e nwee ihe dị mkpa na-azọpụta ndụ na akụrụngwa, nke na-adị ụkọ n’ụwa niile, maka Naịjirịa site na ndị nrụpụta ngwa ọrụ na usoro gọọmentị na gọọmentị.
18. Nkesa na mmụba nke palliatives nke m duziri na mgbasa ozi m na mbụ ka na-aga n'ihu n'ụzọ doro anya. M na-echeta ihe yiri nkụda mmụọ nke ụmụ amaala na-atụ anya na-eche m. Ana m arịọ ndị niile ga - erite uru ka ha nwee ndidi ka anyị na - aga n’ihu na - arụ ọrụ yana usoro nkesa na ndị gọọmentị steeti.
19. Etuola m Central Bank of Nigeria na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ ka ha mekwuo atụmatụ na ndokwa maka nchịkọta mkpalite gbasara ego gbasara obere ụlọ ọrụ obere na ọkara. Anyi matara oke oru di nkpa na ha na aku na uba Naijiria.
Ugbokuta Alọ ọrụ Nche anyị na-aga n'ihu na-ebili ihe ịma aka nke ọnọdụ a na-adịghị ahụkebe. Ọ bụ ezie na anyị na-echegbu onwe anyị banyere nsogbu nchedo dịpụrụ adịpụ nke metụtara ndị omekome na ndị na-adịghị mma, Achọrọ m ịkwado ndị Naijiria niile na nchekwa na nchekwa gị ka bụ isi ihe dị mkpa anyị, ọkachasị n'oge ndị a siri ike na nke a na-ejighị n'aka. Dịka anyị na-elekwasị anya n’ichekwa ndụ na akụnụba, anyị agaghị anabata mmebi iwu ndị mmadụ na-emegbu ndị ọrụ nchekwa anyị. Ọnọdụ ole na ole a kọrọ na-akwa ụta, achọrọ m ịkwado gị na a ga-ekpe ndị ikpe a ikpe.
20. A na m arịọ ndị Naijiria niile ka ha gaa n’ihu na-akwado ma na-egosi nghọta mgbe ọ bụla ha zutere ndị ọrụ nchekwa. Ọzọkwa, maka nchedo ha, enye m ndị ọrụ nchekwa nke ụlọ ọrụ nchekwa ka ha nye ha ihe nchekwa onwe ha dị mkpa maka nchekwa nke ha.
21. Ka anyị na-aga n'ihu ịkọwapụta nzaghachi anyị na etiti Lagos na FCT, ana m echegbu onwe m banyere ihe ndị na-adịghị mma na-eme na Kano na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya. Agbanyeghi na nyocha dị omimi ka na-aga n’ihu, anyị ekpebiela itinye ndị ọrụ gọọmentị etiti ọzọ, ihe onwunwe, na teknụzụ iji wusie ike ma kwado mbọ gọọmentị. Anyị ga-amalite itinye ya n'ọrụ ozugbo.
22. Na Kano, na ọtụtụ Steeti ndị ọzọ nke na-edekọ okwu ọhụụ, nchọpụta mbido na-egosi na ụdị ikpe a na-abụkarị site na njem ndị dị n'etiti steeti na mbupụta obodo.
23. Site n'ihe ndị a, ana m arịọ ndị Nigeria niile ka ha gaa n'ihu na-agbasosi ike na ndụmọdụ ndị Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ Maka Ọrịa Nigeria bipụtara. Ndị a na-agụnye ịsa aka mgbe niile, ịkwapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iyi ihe mkpuchi / mkpuchi ihu ọha n'ihu ọha, izere njem na-enweghị isi na njem, yana izere nnọkọ buru ibu ka dị mkpa.
24. Nigeriansmụnna anyị ndị Naijiria, maka izu anọ gara aga, imirikiti akụkụ ala anyị nọrọ n’okpuru mkpọchi gọọmentị etiti ma ọ bụ Steeti. Dịka m kwuru na mbụ, usoro ndị a dị mkpa yana mkpokọta, enyerela aka belata mgbasa nke COVID iri na itoolu na Nigeria.
25. Agbanyeghị, mkpọchi ndị dị otu a abụrụkwala nnukwu mbibi akụ na ụba. Ọtụtụ ụmụ amaala anyị enwekwaghị ihe ha ji ebi ndụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ achụpụwokwa ego. Onweghi obodo nwere ike ibute mmetụta zuru oke nke mkpọchi a nọgidere na-eche ka mmepe ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ.
26. N’okwu m gara aga, ekwuru m Gọọmentị Etiti ga-ewepụta usoro na amụma ga-echekwa ndụ mmadụ ma chekwa ndụ.
27. N'ime izu abụọ a, ndị gọọmentị etiti na nke Gọọmentị ejikọtara ọnụ na nke jikọrọ aka ọnụ na-arụsi ọrụ ike na nke a otu esi edozi mkpa ọ dị ichekwa ahụike ma na-echekwa ihe eji ebi ndụ, na-enyere usoro kachasị mma n'ụwa aka ma buru n'uche ọnọdụ anyị dị iche.
28. Anyị lere anya na nyocha ka ụlọ ọrụ anyị, ahịa anyị, ndị ahịa anyị, na ndị na-ebugharị anyị nwere ike isi rụọ ọrụ ma n'otu oge ahụ na-asọpụrụ ntuziaka NCDC gbasara ịdị ọcha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
29. Anyị nyochara ka ụmụ anyị ga-esi mụta ihe n ’emebi emebi ahụike ha.
30. Anyi tụlere etu ndi ọrụ ugbo anyị ga-esi wee kụọ ihe ubi n’enweghị nsogbu n’oge udu mmiri a iji hụ na nchekwa nri anyị adịghị emebi. Ọzọkwa, anyị tụlekwara otu esi ebufe ihe oriri na mpaghara nchekwa mpaghara ime obodo na mpaghara nhazi ụlọ ọrụ yana n'ikpeazụ, gaa ebe ndị isi oriri.
31. Ebumnuche anyị bụ imepụta atumatu atumatu nke ga-ahụ na akụnụba anyị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ka anyị ka na-ejigide mmekpa ahụ anyị na-eme ihe ike na COVID ọrịa iri na itoolu. Otu mkpebi ndị a siri ike ka ndị ndu gburugburu ụwa na-eche ihu.
32. Dabere na nke a ma kwekọọ na ndụmọdụ ndị otu Task Force na COVID iri na itoolu, kọmitii gọọmentị etiti gọọmentị dị iche iche enyochala ihe gbasara mmekọrịta akụ na ụba na Nzukọ Ndị Ọchịchị nke Nigeria, akwadoro m maka ịgbatị na nwayọ nwayọ nke mkpọchi. jikoro na FCT, Lagos na Ogun Steeti bido na Saturday, 4nd Mee 2020 n’elekere itoolu nke ụtụtụ.
33. Agbanyeghị, nke a ga-agbaso n'ụzọ siri ike na mwakpo siri ike nke ule na usoro ịkpọtụrụ kọntaktị ma kwe ka mweghachi nke ụfọdụ akụ na ụba na azụmaahịa na mpaghara ụfọdụ.
34. Isi ihe nke usoro ohuru ohuru a dika ndi a;
a. Businesseslọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahọpụtara nwere ike imeghe site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ;
b. A ga na-alọta abali abali site na 8 pm ruo 6 am. Nke a pụtara na a ga-amachibido mmegharị niile n'oge a belụsọ ọrụ ndị dị mkpa;
c. ihe A ga-amachibido iwu njem njem njem etiti mba na-adịghị mkpa ruo mgbe ọkwa ọzọ;
d. A ga-ekwe ka mmegharị ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ na-achịkwa ma na-achịkwa ya ka ha kwe ka ngagharị nke ngwaahịa na ọrụ sitere n'aka ndị na-emepụta ihe na ndị ahịa.
e. Anyị ga-ekwusi ike na ojiji nke ihe nkpuchi ihu ma ọ bụ ihe mkpuchi n'ihu ọha na mgbakwunye na ịchekwa nke anụ ahụ na ịdị ọcha onwe onye. Ọzọkwa, mmachi ndị na-elekọta mmadụ na nzukọ okpukpe ga-adịgide. A na-agba ndị gọọmentị Steeti, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, na ndị ọrụ ebere ume ka ha kwado mmepụta nke ihe mkpuchi akwa maka ụmụ amaala.
35. Maka izere obi abụọ, mkpọchi na FCT, Lagos & Ogun Steeti ga-anọgide na-adịgide ruo mgbe ndị ọhụrụ a malitere ịdị na Satọdee, ụbọchị nke abụọ Mee 2 na elekere iteghete nke ụtụtụ.
36. Ndi otu ndi isi oche nke ndi isi ala gha enye nkọwa zuru ezu banyere mpaghara na ntuziaka oge iji nye ohere maka ndị gọọmentị, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ.
37. Ihe ndị a dị n’elu bụ ntuziaka. Ndị Gọvanọ Steeti nwere ike ịhọrọ ịmegharị ma gbasaa dabere na ọnọdụ ha pụrụ iche ma ọ bụrụhaala na ha na-akwado usoro ntuziaka enyere n'elu ahụike na ịdị ọcha ọha na eze.
38. Ntụziaka ndị a emezigharịrị agaghị emetụta steeti Kano. Mkpokọta mkpọchi nke Gọọmentị Gọọmentị kwupụtara na nso nso a ga-anọgide na-eme ka a na-achịkwa ya oge niile. Gọọmentị etiti ga-etinye mkpa niile nke mmadụ, akụrụngwa, na teknụzụ iji kwado steeti n'ịchịkwa na ibute ọrịa na-efe efe.
39. Achọrọ m ọzọ ịja ndị ọrụ nọ n’ihu n’ofe mba ahụ mma bụ ndị, kwa ụbọchị, na-etinye ihe niile n’ihe egwu iji hụ na anyị meriri ọgụ a. Maka ndị butere ọrịa a na ọrụ ha, kwenyesie ike na Gọọmentị ga-eme ihe niile iji kwado gị na ezinụlọ gị n'oge nsogbu a siri ike. M ga-ejikwa ohere a mesie gị obi ike na nchekwa gị, ọdịmma na ọdịmma gị dị mkpa nye gọọmentị anyị.
40. Agam amata nkwado anyi natara site n’aka ndi chi ala anyi, ndi otu Christian Association of Nigeria, ndi Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs na ndi isi ochichi obodo na ndi ndu. Nkwado na nkwado gị enyerela aka nke ọma na ihe ịga nke ọma anyị dekọtara ruo taa. M ga-agba gị niile ume ka ị na-aga n'ihu na-eme ka ị mata banyere mkpa nke coronavirus n'etiti ndị na-efe gị na obodo ma na-arịọ ka ha gbasoro ndụmọdụ ndụmọdụ ahụike ọha na eze.
41. Agam ekele ndi govamenti ndi ochichi nke ndi Nigeria na ndi otu ndi isi ochichi maka oru ha nile rue ugbua. Site na mmekota a, enwere m ntụkwasị obi na a ga-enwe ihe ịga nke ọma.
42 .. Achọrọ m ikele ndị otu ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ebere, ezinụlọ UN, European Union, mba ndị nwere omume enyi, ndị mgbasa ozi na ndị mmekọ ndị ọzọ ewerela ọrụ nke ịkwado nzaghachi anyị.
43. N’ikpeazụ, m ga-ekele ndị Naịjirịa ọzọ maka ndidi na imekọ ihe ọnụ n’oge a siri ike na ịma aka. Anam emesi gị obi ike na gọọmentị ga-anọgide na-eme ihe niile dị mkpa iji kpuchido ndụ na ibi ndụ nke ụmụ amaala anyị na ndị bi na ya.
Ana m ekele gị maka ige ntị ma ka Chineke gọzie Federal Republic of Nigeria